Ny Bitsibitsika Afgana : Hankalaza Sa Tsia! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2017 3:39 GMT
(Marihina fa tamin'ny 8 May 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Miresaka momba ny tsingerintaona nahavotsotra an'i Kabul ho eo am-pelatànan'i Mujahedin ireo bilaogera Afgana. Tsy mitovy hevitra izy ireo na hankalaza izany na tsia. Nahoana no tokony hankalaza io andro io ny vahoaka Afgana? Moa ve nahazo fahafahana, rariny izy ireo na …. Nilaza ilay bilaogera fa vao mainka hitondra ady mandritra ny folo taona hafa indray ity hetsika ity. Hoy izy,
Ny Afgana dia tsy niady ady masina hitady rariny, na fanambinana, … Mba hamantaranao hoe nahoana izy ireo no mankalaza dia tokony ho fantatrao ny fomba fijerin'ny Afgana ny zava-misy sy ny fomba fisainany. Misy lanjany manokana ny herimpo ary tsy ny vokatra no zava-dehibe .
Nilaza momba ity hetsika ity i Dialogue 3 fa ny jihad (ady masina) no ankalazaintsika fa tsy ny olona (ireo mpitarika Mujahedin) toa an'i Rabbani, Syaaf ary ny hafa. Nirotsaka an-tsehatra tamin'ity ady manohitra ny fanafihana vahiny ity ny vahoaka ary mankalaza izany isika.
Miresaka momba ity andro ity ho anisan'ireo andro nampalahelo indrindra tamin'ny tantaran'ny firenena i Yadshtayi az Gharb (Fanamarihana avy any Andrefana). Nanoratra izy fa nanatri-maso ny zava-tsarotra ratsy indrindra teo amin'ny tantaran'ny Afganistana tao anatin'ny zato taona farany ny vahoaka. Ny andro taorian'ny nidiran'i Mujahedin tao Kabul, nipoaka ny ady teo amin'ireo vondrona Mujahedin isankarazany.
Miresaka momba ny maha-zavadehibe ny diplaomasia matihanina ho an'ny firenena i Nikobad. Hoy ilay bilaogera raha nanoratra
“Tokony handray anjara amin'ny sehatra iraisam-pirenena i Afganistana. Tsy afaka manana ny politikany ivelany manokana ireo antoko politika, vondrona parlemantera, minisitera ary ireo hafa rehetra. Raha tsy izany dia hisy ny fisaratsarahana maro eo amin'ny diplaomasia sy ny paikadin'ny politika ivelany, izay hiteraka fahalemena ho an'i Afganistana any amin'ny faritra sy manerantany rehefa tsy mahomby izany amin'ny farany .
Nanampy ilay bilaogera fa mila diplaomaty manerantany i Afganistana fa tsy ireo diplaomaty mahazatra fotsiny. Nanazava izy fa ny diplaomaty mahazatra dia ireo izay, tsy manana fahalalahana momba ny firenena vahiny kanefa mamita iraka noho izy ireo tsara fifandraisana.
9 ora izayZeorzia